Handy Air Vacuum Pick Up Hand Tools & Air Blow Gun (3kgs,50mm,10cm, Mark-Free) ထုတ်လုပ်သူ | GISON
လက်ကိုင်လေ ကိရိယာ/နယူးနစ် ကိရိယာများ ထုတ်လုပ်သူ - GISON. ထိုင်ဝမ် GISONGP-SA50 တွင် ထောင့် 50 မီလီမီတာ Suction Cup ပါရှိပြီး ပြားချပ်ချပ် ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ရှိ မည်သည့်အရာအတွက်မဆို လျင်မြန်စွာ ကောက်ယူနေရာချနိုင်သည်။ 47 နှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း 50 သို့ ရောင်းချခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဥ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အလှဆင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်းနှင့် သတ္တု/သစ်သား/ကျောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် မော်ဒယ် 500 ဖြင့် ISO နှင့် CE လက်မှတ်ရရှိထားသော Air Tools၊ Pneumatic Tools နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
Handy Mark-Free Air Vacuum Suction Lifter နှင့် Air Blow Gun (2 in 1)
Air Angle Vacuum Sction Pen၊ Air Angle Vacuum Sucking Pen
GP-SA50 ၏ ဆန်းသစ်သောလေဟာနယ် စုပ်ယူမှုသည် အုတ်များ၊ ပုံးများ၊ polyurethane အမြှုပ်များ၊ သစ်သားပြား၊ စက္ကူစသည့် ကြမ်းသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် သက်ရောက်နိုင်ပြီး GP-SA50 Air Suction Lifter သည် ရေထဲတွင် အရာဝတ္တုများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။
GP-SA50 Air Suction Lifter ၏ Suction Cup သည် ကိုင်တွယ်နေသည့် အရာဝတ္တုတွင် သဲလွန်စမရှိသော အမှတ်အသားမရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခု (ဥပမာ ဖန်၊ မှန်ဘီလူး၊ wafer၊ အကန့်၊ ဖန်သားအိမ်၊ ဆိုလာပြား ...)။
အရာဝတ္တု၏ မျက်နှာပြင်ကို လက်ဖြင့် ထိပါက အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထွ အရာဝတ္ထု၏ အပူချိန်သည် မြင့်မားလွန်းသည် ( Max.Temperature သည် 250 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် )။
စုပ်ခွက်အရွယ်အစား : 50 mm
Suction Cup ပစ္စည်း : Silica Gel
စွမ်းရည် :3kgs (သံချောအတွက်)
အလေးချိန် 0.303 ကီလိုဂရမ် (လေဝင်ပေါက်မပါဝင်ပါ)
အရွယ်အစား : 31.5 x5x 5.5 cm (LxWxH)
ထုပ်ပိုးမှု (1 ကတ်ထ်): 50 pcs/3.1 cu.ft/GW: 25 ကီလိုဂရမ်
သမားရိုးကျ စုပ်ခွက်သည် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သာ သက်ရောက်နိုင်သော်လည်း ဆန်းသစ်သော ဖုန်စုပ်ခွက်သည် အုတ်များ၊ ပုံးများ၊ polyurethane အမြှုပ်များ၊ သစ်သားပြား၊ သတ္တု၊ စက္ကူ၊ ဖန် အစရှိသည့် ကြမ်းပြင်ညီညာသော မျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးချသည့် ဖုန်စုပ်စက်၏ အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်မှာ3ကီလိုဂရမ်အထိဖြစ်သည်။
GP-SA50 ၏ Suction Cup သည် အရာဝတ္တုအား ကိုင်တွယ်နေသည့်အရာတွင် သဲလွန်စမရှိသော အမှတ်အသားမရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခု (ဥပမာ ဖန်၊ မှန်ဘီလူး၊ wafer၊ ဘောင်၊ ဖန်သားပြင်၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်မှန်၊ ဆိုလာပြား...)။
Max. အပူချိန် 250 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျ စုပ်ယူမှုသည် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သာ သက်ရောက်နိုင်သော်လည်း ဆန်းသစ်သော ဖုန်စုပ်စုပ်စက်သည် အုတ်များ၊ ပုံးများ၊ polyurethane အမြှုပ်များ၊ သစ်သားပြား စသည်တို့ကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်များတွင် သက်ရောက်နိုင်သည်။ GP-SA50 သည် ရေထဲတွင် အရာဝတ္တုများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။
ပါးလွှာသော ပန်းကန်ပြားကို လက်ဖြင့် ကောက်ယူရန် ခက်ခဲသည်။ ပါးလွှာသောပန်းကန်ပြားကို အလွယ်တကူ (စုပ်ယူရန်) GP-SA50 ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထွ ပါးလွှာသော သံပြား။
Handy Air Vacuum Pick Up Hand Tools နှင့် Air Blow Gun (3kgs၊50mm၊10cm၊ Mark-Free) စမ်းသပ်မှု
47 နှစ်ကြာ သွားလာရလွယ်ကူသော လေဖုန်စုပ်ကိရိယာများနှင့် လေမှုတ်သေနတ် (3kgs၊50mm၊10cm၊ Mark-Free) ထုတ်လုပ်သူ -GISON
ထိုင်ဝမ်၊GISON MACHINERY CO., LTD.၁၉၇၃ ခုနှစ်ကတည်းက၊ Handy Air Vacuum Pick Up Hand Tools & Air Blow Gun (3kgs,50mm,10cm,Mark-Free) ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်၊ တွယ်ကပ်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ မော်တော်ယာဥ် / ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်းစသည်ဖြင့် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။